Imvunge iSilo uMisuzulu sisolwa ngokubeka inkosi
ISILO uMisizulu kaZwelithini ogxekwa ngokugcoba inkosi yaKwaNobamba, eBabanango Isithombe : BONGANI MBATHA (ANA)
KUQUBUKE umsindo osuswe ngomunye wabantwana beSilo Samabandla uZwelithini kaBhekuzulu, egxeka iSilo uMisizulu kaZwelithini, esisola ngokugcoba uMnuz Ntombela, ukuthi abe yinkosi yaKwaNobamba, eBabanango.
Kusabalale inkulumo yoMntwana uLindokuhle Zulu, ezinkundleni zokuxhumana emuva kokuthi iputshuke kwiWhatsapp yomndeni wasendlunkulu. Uzwakala ebhodla umlilo ngokuthi uMisuzulu, ukhombisa ngokusobala ukwentula ulwazi lomlando kaZulu.
Ukhala ngokuphanjaniswa kwamakhosi, uthi umlando ukhomba ukuthi isihlalo ngesenkosi uLukhwazi. Kule nkulumo uMntwana uLindokuhle, okuthiwa uyindodana yeSilo samaBandla uZwelithini, ayathola entombini, ugxeka iSilo ngokuzama ukuthola abantu abaningi abamesekayo.
Uveza izinsolo zokuthi uMisuzulu ufumbathiswe imali nguNtombela ngoba eyinjinga. Kule nkulumo uphinde asole noMntwana wasoNkweni, u-Africa Zulu, ngokuthi yibona abeseka uMisuzulu.
Ethintwa uMntwana Africa Zulu, uthe kungamanga ukuthi iSilo sigcobe inkosi yakwaNobamba.
“Awukho umcimbi wokugcotshwa kwenkosi obukhona. Umcimbi engiwaziyo mina ngokaKhisimusi obugujwa kwaNobamba ngoDisemba 29. UMntwana uLindokuhle ungomunye wabantu beqembu elidukile. Kuningi nje akwenzayo okuphambene. Ungumuntu owukhonze kakhulu umsindo ngakho-ke akumele nize nizihluphe ngezinto azikhulumayo,” kusho uMntwana u-Africa.
Eqhuba uthe uMntwana uLindokuhle wazalwa ngaphandle (entombini) futhi akanalo ilungelo lokuzenzela umathanda.
UMntwana uThulani Zulu uqale wathumela inkulumo eqoshiwe ayithumelele uMntwana uLindokuhle, ecacisa ngomcimbi owawuhanjelwe yiSilo. Kule nkulumo uzwakala etshela uMntwana uLindokuhle, ngenhloso yalo mcimbi waminyaka yonke.
Ephawula uMntwana uThulani uthe: “ Ukhuluma iphutha uMntwana futhi kusobala ukuthi ukhohliswe ozwe udaba njengoba wayengekho emcimbini.”